Slackel KDE 4.9.2: နောက်ဆုံးပေါ် KDE ပါသည့် Slackware-based Distro | Linux မှ
Slackel KDE 4.9.2: နောက်ဆုံးပေါ် KDE နှင့်အတူ Slackware-based Distro
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | ဖြန့်ဝေ
Slackel KDE 4.9.2 ဖြန့်ချိခဲ့သည်နှင့်အကယ်စင်စစ်သင် ... ဒီကဘာလဲဆိုတာတွေးမိ 🙂
၎င်း၏အမည်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် KDE ကိုသုံးသော distro၊ အထူးသ KDE 4.9.2 (ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ )အခုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း), ဒါပေမယ့်မသာ:
Kernel ၃.၂.၂၉ (၃၂ နှင့် ၆၄ bit)
Firefox ကို 16.0.2
OpenJRE-7u9 (OpenJDK-7u9 ကို repos တွင်ရနိုင်သည်), Rhino, Icedtea-web, Pidgin နှင့် Gftp ။
Gparted, Wicd, slapt-get (နှင့်၎င်း၏ Gslapt GUI) စသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ discs များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Bangarang 2.1 နှင့် Clementine 1.0.1 အပြင် K3B 2.0.2 လည်းရှိသည်။
Office အလိုအလျောက်ကဏ္sectionတွင် Calligra (Word, Stage and Tables) ရှိသည်။, KOrganizer, KAddressBook နှင့် Okular ကြည့်ရှုသူ။
ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းတွင် Krita, Karbon, Gwenview, KColorChooser နှင့် KSnapshot တို့ကိုတွေ့ရသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲများပါရှိသည့် KDE distro၊ versionitis ကြောင့်ခံစားရသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
screenshots တွေထပ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နှင့်အညီ, ISO ကို download လုပ်ရန် link ကို:
ဒေါင်းလုပ် Slackel KDE 4.9.2 (32bits) ဒေါင်းလုပ် Slackel KDE 4.9.2 (64bits)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Slackel KDE 4.9.2: နောက်ဆုံးပေါ် KDE နှင့်အတူ Slackware-based Distro
၎င်းသည်အလွန်သင့်လျော်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်း၎င်း၏အသစ်ထည့်သွင်းထားသော CD အသစ်သည် kernel ၃.၆ ယူဆောင်လာသည်ကို Arch ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ https://www.archlinux.org/news/november-release-of-install-media-available/ အကယ်၍ ဒီ distro က 3.2.29 ကိုယူလာရင်နောက်ဆုံးပေါ်အားလုံးကိုမှမလာနိုင်ဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ် 3.6 kernel ကပိုကြီးနေသေးလား။
Desktop နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ပြောဆိုမှုမှာ Slack သည်တည်ငြိမ်သော kernel များနှင့်တိုးချဲ့ထောက်ခံမှုများကိုသာအသုံးပြုသည်။
Slackware သည် server-oriented distro ဖြစ်သော်လည်း Slackel သည် Slackware (SolusOS / Debian GNU / Linux ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု) အပေါ်အခြေခံပြီးခေတ်မီ desktop distro ဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင် 3.6.5 kernel ကိုဖြန့်ချိလိုက်တာနဲ့ (Liquorix သည် 3.6.4 တွင်ဖြစ်သည်) Desktop ပေါ်တွင် kernel အဟောင်းကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ kernel ဗားရှင်းတိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်များနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များသည်ကြီးမားသည်။
JO JO JO ... ထို့နောက်ငါ Kernel 3.2.0 ကိုသုံးသောသူ ... ငါဟာကျောက်တုံးအရွယ်ရောက်နေပြီလား။ … ဟားဟား!
အခြားအရာများအနက် ၃.၆ ဌာနခွဲသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ip / TCP လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။ ext3.6 အသုံးပြုသော disk သုံးစွဲသူများ၏ပမာဏသည်တိုးမြှင့်ထားသည် (အသုံးပြုသူများစွာမှအများသုံးကွန်ပျူတာများကိုစီမံခန့်ခွဲသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်)၊ ဆိုင်းငံ့ / hibernate မျိုးစပ် တိုးတက်လာသော (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘက်ထရီကုန်တော့မည့်အချိန်တွင် hibernation ကိုသက်ဝင်စေသည့်ဆိုင်းငံ့မှု) BTRFS၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု (နှင့်ပြသ!) နှင့်အခြားအပြောင်းအလဲများ။
kernel အသစ်တစ်ခုထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော bug များမရှိပါ (ကျွန်ုပ်သည်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သော) ကျွန်ုပ်၏မူဝါဒသည်နောက်ဆုံးပေါ်ပြIနာကိုတွေ့ရှိပါကယခင် kernel သို့အမြဲပြန်သွားနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ပိုမိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ ကောင်းသည်။ 😉
ငါ link ကို paste လုပ်ဖို့မေ့လျော့ forg
Uff …အခု ၃.၆ ကိုသုံးချင်တယ်၊ ငါ့အင်တာနက်ကပိုမြန်လားမြန်လားကြည့်ရအောင်… LOL !!
ရေခဲခေတ်အလယ်တွင်ရှိနေသော Debian အသုံးပြုသူများသည် distro ၏အေးခဲနေသောကြောင့် repos သည်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။
ဟုတ်ကဲ့! 🙁…ငါ KDE 4.9.x ကိုရူးနေပြီ
ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါ Debian ဘယ်လောက်ကြာကြာအေးခဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် openSuse တွင် KDE4.9 ၌ရှိပြီးတိုးတက်မှုမှာသိသာထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းသည်ဗားရှင်း ၄.၉ ထက် ပို၍ အရည်ပျော်သည်။ ၎င်းင်း၏ဖခင် Slackware ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပေါင်းထည့်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော distro ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးသည်။ Chakra ကိုရင်ဆိုင်ပါ
@ KZKG ^ Gaara သင် KDE 4.8.5 သည်ကောင်းလျှင် KDE 4.9.X ကိုကြိုးစားစမ်းပါ
ကျေးဇူးပြု၍ Chakra နှင့် slackel တို့သည်မတူညီသောလိဂ်နှစ်ခုတွင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
၎င်းသည်အဆင်တန်ဆာကောင်းတစ်ခုနှင့်ပုံရသည်။ Slackware သည်အဘယ်အထုပ်မန်နေဂျာကိုသုံးသနည်း။ ! ငါဒီ distro အကြောင်းကိုမသိသောဤမျှလောက်ရှိပါတယ် ..
Slackware သည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် package manager မရှိပါကတပ်ဆင်မှုအပေါ်တွင်မှီခိုမှုကိုလည်းအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူ့ဝီကီမှာသူပြောခဲ့သလိုပဲ "ဒီ distro ကိုသုံးတဲ့ Slackware ကိုငါတို့ကြိုက်တယ်။ "
သိသာထင်ရှားသည့်နည်းလမ်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ package များကိုစီမံရန်နှင့်စီမံရန်မည်မျှခက်ခဲသည်ဆိုသည် - pacman, yum (အလွန်ထူးကဲသောတိုးတက်မှုနှုန်း!)၊ Zypper သို့မဟုတ် connary တို့ကဲ့သို့သောထူးခြားသော package manager များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Slackware packages များရိုးရှင်းစွာ tar.gz ဖိုင်များ (/ သူတို့က tar.xz သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသားရှိပါသလားမသိပါ) / directory နှင့် voila ကိုဆန့်ကျင် unzipped ဖြစ်ကြောင်း, program ကို install လုပ်!
Slackware တွင် dpkg / apt-get (top of on-on) အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း၏ရပ်ရွာလူထုမှပြုလုပ်သော package manager တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှီခိုမှုဖြေရှင်းခြင်း၏ဤပြwholeနာအားလုံးကိုသက်သာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ပြောရရင် Slackel က slap-get ကိုသုံးမယ်၊ သူ့မှာကိုယ်ပိုင် package manager ရှိမရှိမသိဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်အစီအစဉ်ကို run ရန်အထုပ်ကို unzip လုပ်လျှင်၊ တပ်ဆင်ရန်အချိန်ယူမှသာထိခိုက်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်မှီခိုမှုကိုဖြေရှင်းရန်ရှိပါက ... မည်မျှပင်ပန်းသည်😐
သူတို့ကဒီမှာ kernel ရဲ့ပြissueနာကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်အောက်ပါဖြန့်ချီမှုများမှာသူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ Kubuntu 12.04 and 12.10, x64 နှစ်ခုစလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တွင်2ထည့်သွင်းထားသောအခြား x86 စက် ၂ ခုတွင်၊ ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေသည်။ ၃.၅.၇ နှင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ၊ (ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မလုပ်မိရန်) ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်အတိုင်း ၃.၆ - ၃.၆.၂ - ၃.၆.၃ - ၃.၆.၄ နှင့် ၃.၆.၅ နှင့်၎င်းတို့နှင့်မည်သည့်အရာများကိုမဆိုပြန်လည်စတင်။ Pidgin က၎င်းသည်အခြားကွန်ရက်မှချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နိမိတ်လက္ခဏာထပ်မံထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ် Skype နှင့်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုဖွင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်သူများနှင့်အဆက်အသွယ်မပြခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များကိုကြည့်ရှုရန်ဘရောက်ဇာ (Opera, Chromium, Mozilla) ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာဖွင့်သော်လည်းအီးမေးလ်များမတင်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်သော်လည်း ၃.၅ စီးရီးများမှတစ်ခုခုနှင့်ကျွန်ုပ်ပြသနာများမရှိခဲ့ပါ။ ၃.၆ စီးရီးများနှင့်ပြitနာများထပ်မံဖြစ်ပွားလာသည်နှင့်အမျှအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် ၃.၅.၇ နှင့်အတူရှိနေပြီးထိုအကြောင်းပြချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုစက် ၄ မျိုးဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆဲလ်ဖုန်း၊ နားကြပ်၊ ကီးဘုတ်အစရှိသဖြင့် ... ၃.၆ စီးရီးများနှင့်အတူ bluetooh ကိုမှားယွင်းစွာပြုပြင်ထားသည်ကိုဖော်ပြရန်မေ့သွားသည်။ တောက်ပမှုနှင့်အသံအတိုးအကျယ်ခလုပ်များသည် LibreOffice နှင့်ပင်အချိန်ယူခဲ့သည် ပေါ်လာ။ 3.6 စီးရီးနှင့်အတူအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Slackware 14 + KDE 4.9.2 ကိုလိုချင်သူများအတွက်အမြဲတမ်းလို Eric Hameleers (ဂြိုလ်သားဟုသိကြသော Slackware developer) သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သော package များရှိသည်။
ဤ packets များသည်အလွန်ကောင်းသည်။ တကယ်တော့ alien ktown repo သည် KDE version များကိုလက်ရှိ Slackware ၏ဌာနခွဲတွင်ပေါင်းစပ်ရန်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
kernel ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်တဲ့ distros တွေဟာ kernel ကိုသုံးပြီး 3.2 အဖြစ်မွမ်းမံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Valve - ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် Linux ဟာ Windows 8 ထက်ပိုအလုပ်လုပ်တယ်
ရော်ဘာ ducky ပွတ်တိုက်